Caafimaadka iyo Sayniska | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 3
Posts in category Caafimaadka iyo Sayniska
Walxaha iskujira waxaa mid mid loogu kala saari karaa ayadoo laraacayo habab kala duwan, hababkaas oo kutiirsan nooca iskujirka. Hababkaas waxaa kamida ah, miirida, uumibixinta, xareedaynta iyo midabsawir saafida. Kala soocitaanka adkaha laga soocayo hoorka (miirid) Hadii walaxdu aysan kumilmin dareeraha waxaa ugu yeernaa mamilme. Tusaale ahaan, ciidu kuma milanto biyaha, waa mamilme. Miirid waa hab looga soocayo mamilmaha kujira hooraha (milaha), marka iskujirku yahay biyo iyo ciid waa lakala miiraa. Ciidu waxa ay ku haraysaa waraaqda miirida (waxa ayna noqonaysaa haraa). Biyuhu waxa ay dhaafayaan oo ka gudbayaan waraaqda (waxa ayna noqonayaan saafi). Bakeeriga waxaa kujira iskujir mamilme …
“Waxaan u ekahay dadkuna ii arkaan sida qof uur leh markasta. In xanuunkan uu igu dhacdo wuxuu iga dhigay sida qof kale.” Natasha King kama hadleyso arrin la xiriirta cayil xad dhaaf ah, ee waxay ka hadleysaa in ay qabto cudur sababa in hanaanka difaaca jirka uusan u shaqeyn sidii loo baahnaa kaas oo lagu magacaabo coeliac. “Wuxuu cudurkan igu dhacay anigoo 18 sano jir ah mana ka war haynin inaan qabo,” ayey tiri gabadha oo hadda 21 sano jir ah oo la hadashay BBC Radio 1 Newsbeat. Cudurka Coeliac waa xaalad ka dhalata falcelin ay sameeyaan qaar ka mid …
Taxaddar ahaan haweenka uurka leh waxaa loo sheegayaa in ay feejignaadaan isla markaana ay si gaar ah u raacaan tallaabooyinka looga hortagayo coronavirus, sid kala fogaanshaha taas oo hoos u dhigi karta khatarta kaga imaan karta cudurka. Blase maxeynu kala soconaa saameynta uu cudurkan ku yeelanayo haweenka uurka leh? Coronavirus dhibaato intee la eg ayuu ii geysan karaa haddii aan uur leeyahay? Inkastoo wali wax badan oo ku saabsan sida uu haweenka uurka leh u samaeyn karo xanuunkaan aysan dhaqaatiirtu ogeyn, haddana waxaa la ogyahay in haweenka uurka leh aanay wax badan ka duwnayn dad kale ee qaangaarka ah “Haddii …